အကောင်းဆုံးလက်ကားအရွယ်အစား ၇ စိတ်ကြိုက်အပြင်ဘက်စျေးသက်သာသည့်ရော်ဘာဘတ်စကက်ဘောထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ။ | Tianda
လက်ကားအရွယ်အစား ၇ စိတ်ကြိုက်အပြင်ဘက်စျေးသက်သာသည့်ရော်ဘာဘတ်စကက်ဘော
ထုပ်ပိုး: Opp Bag
ဘောလုံးပစ္စည်း ရော်ဘာ, ရော်ဘာ
ထုပ်ပိုး Opp Bag
အသုံးပြုမှု အပြင်ဘက်လမ်းပေါ်မှာ PLAY
50 pcs / polybag, 250pcs / ctn ။
အရေအတွက် (အပိုင်းအစများ) 1 - 500 501 - 3000 3001 - 10000 > 10000
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့များ) 15 25 30 ညှိနှိုင်းခံရဖို့
အရွယ်အစား 1 #3#5#6#7#
အလေးချိန် 600-650g (အရွယ်အစား 7)၊ 510-560g (အရွယ်အစား 6), 480-500g (Size5), 90-100g (Size1)
အဝိုင်း 68-71cm (အရွယ်အစား 5), 64-66cm (အရွယ်အစား 4), 57-59cm (Size3), 45-47cm (Size2), 40-42cm (Size1)
Panel ၈ ပြား
ဆီးအိမ် နိုင်လွန်သည် butyl ဆီးအိမ်ဒဏ်ရာရသည်
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်ကို 50pcs / ctn, 55 * 53 * 31cm (Size7)
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်အားယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောစျေးဝယ်သူကုမ္ပဏီဖြစ်သည့်အပြင်အကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းများနှင့်အတူအကျယ်ဆုံးဒီဇိုင်းများနှင့်စတိုင်များကိုသင့်အားအမြဲတမ်းပေးသည်။ ဤအားထုတ်မှုများအနေဖြင့်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများရရှိနိုင်သည့်အပြင်ဒီဇိုင်းများအမြန်နှုန်းနှင့်စက်ရုံမှတရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့မှုသို့ဥရောပသို့တင်ပို့သည်အားကစားစျေးကွက်အရည်အသွေးမြင့်စက်ချုပ်ဘောလုံး၊ စက်ရုံထောက်ပံ့ရေးတရုတ်ငွေကြေးဖောင်းပွဘောလုံးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဘောလုံးစျေးနှုန်းများပါ ၀ င်သည်။ ဆက်ကပ်အပ်နှံအားထုတ်မှုများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုထူးချွန်နှင့်အတူကုန်သွယ်ကုန်သွယ်မှုသို့ကိုယျ့ကိုယျကို။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအတွက်အချိန်မီပေးပို့မှုအချိန်ဇယား၊ ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းများ၊ အရည်အသွေးနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုထိန်းသိမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ moto သည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်းအရည်အသွေးရှိသောဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။
ထိပ်တန်းအရည်အသွေးရှိသောတရုတ်ဘောလုံးဘောလုံးနှင့်ဘောလုံးဘောလုံးတို့၏စျေးနှုန်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်“ သမာဓိရှိခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ လူများအပေါ်အခြေပြုခြင်း၊ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း” ၏လုပ်ဆောင်မှုနိယာမအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ထိပ်တန်းအဆင့်တရုတ်သင်တန်းဘောလုံးနှင့်ငွေဖောင်းပွမှုသင်တန်း၊ အကောင်းဆုံးသောထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသည်၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်အပြည့်စုံဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံမူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM နှင့် ODM အမှာစာများကိုကြိုဆိုပါသည်။ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အထူးပြုထားပါသည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အမြဲတမ်းဖောက်သည်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲတမ်းရရှိနိုင်ပါပြီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုစတင်ရန်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုပါသည်။
၁။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့ ၀ ယ်သူ၏ LOGO ကိုထည့်နိုင်ပါသလား။
2. သင်၏ထုတ်ကုန်များ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များဘာတွေလဲ? သို့ဆိုလျှင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကားအဘယ်နည်း။
5. သင်၏ကုမ္ပဏီမှိုအခကြေးငွေကောက်ခံပါသလား ဘယ်လောက်လဲ? ကျွန်တော်ပြန်ပေးလို့ရမလား ဘယ်လိုပြန်ပို့မလဲ
ကုမ္ပဏီသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများကိုတက်ကြွစွာအကောင်အထည်ဖော်သည်၊ ISO9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အောင်လက်မှတ်ရရှိပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောအမှာစာသတင်းအချက်အလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပလက်ဖောင်းနှင့်သိပ္ပံနည်းကျစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုယန္တရားများကိုတည်ဆောက်ပြီးပြည့်စုံသောဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှု၊
၇။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အနည်းဆုံးအမှာစာအရေအတွက်ရှိပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်အနိမ့်ဆုံးပမာဏဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ရှေ့သို့ ထိပ်တန်းရောင်းသူစိတ်ကြိုက် Wavy Full Printed Rubber Basketball
ထိပ်တန်းရောင်းသူစိတ်ကြိုက် Wavy Printed Rubber Rubber ...
အရွယ်အစား5လက်ချုပ်ဘောလုံး